Bhasikiti quits 'wrong basket', says Chamisa must form own party - Bulawayo24 News
09 Jan 2021 at 07:51hrs | Views
Bhasikiti, who was a member of the MDC Alliance's National Executive Council (NEC), told TellZim News that he is no longer a member of the MDC Alliance which he says now belongs to MDC-T president Douglas Mwonzora.
"The Supreme Court ruling changed everything and reverted MDC-T back to its 2014 structures. That meant Thokozani Khupe was now the acting president pending and extra ordinary congress.
"The congress was held and this meant that the MDC Alliance now belonged to Mwonzora and not Chamisa. We formed MDC Alliance coming from Zimbabwe People First (ZimPF) and we recognized our leader as Chamisa but the tables have turned now since the party now belongs to Mwonzora.
"I have been clashing with other members that we should rebrand but they were too stubborn to listen. Even vice president Welshman Ncube shared the same view but nobody cared to listen which is why I am distancing myself from the MDC Alliance," said Bhasikiti.
"I do not support Mwonzora and I cannot again support Chamisa who does not want to leave Mwonzora's party. If Chamisa were to form another political party then I would support him. He will always have my support if he decides to rebrand.
"As it stands right now, Chamisa is just but a faction within Mwonzora's party," said Bhasikiti.
More on: #Bhasikiti, #Party, #Chamisa